Material Kumaka - MimoWork
Kuti ive yakanakira kumaka pane zvigadzirwa, MimoWork inopa maviri laser sarudzo yemuchina wako wekucheka laser.Uchishandisa zvinyoreso zvemaka uye inkjet sarudzo, unogona kumaka maworkpiece kuti kurerutsa anotevera laser kucheka uye kunyora kugadzirwa.Kunyanya panyaya yekusona mavanga muindasitiri yekugadzira machira.
Zvishandiso Zvakakodzera:PolyesterPolypropylenes, TPU,Acrylicuye zvinenge zvoseSynthetic Fabrics
R&D yeakawanda e-laser-akachekwa zvidimbu, kunyanya zvemachira.Iwe unogona kushandisa peni yekumaka kugadzira mavanga pazvidimbu zvekucheka, zvichiita kuti vashandi vasonese zviri nyore.Iwe unogona zvakare kuishandisa kugadzira akakosha mamaki senge serial nhamba yechigadzirwa, saizi yechigadzirwa, zuva rekugadzirwa kwechigadzirwa uye nezvimwe.
Zvimiro uye Zvakanakisa
• Mavara akasiyana anogona kushandiswa
• Chiyero chepamusoro chekumaka chokwadi
• Nyore kuchinja chiratidzo peni
• Mark Pen inogona kuwanikwa nyore nyore
• Mutengo wakaderera
Ink-jet yakadhindwa Module
Inoshandiswa zvakanyanya mukutengesa kumaka uye kukodha zvigadzirwa nemapakeji.Pombi inotsikirira yakakwira inotungamira inki yemvura kubva mudhiza kuburikidza nepfuti-muviri uye nepfuti isingaonekwi, ichigadzira inoenderera inoyerera yemadonhwe eingi kuburikidza nekusagadzikana kwePlateau-Rayleigh.
Tichienzanisa ne 'marker pen', ink-jet yekudhinda tekinoroji inzira isingabatanidzike, saka inogona kushandiswa kune akawanda akasiyana marudzi emidziyo.Uye kune ingi dzakasiyana dzechisarudzo senge inki inoshanduka uye isiri-inotenderera inki, saka unogona kuishandisa mumaindasitiri akasiyana.
• Hapana kukanganisa kutenda kune kuonana-yemahara kumaka
• Kurumidza-kuomesa inki, isingadzimiki
• Ingi / mavara akasiyana anogona kushandiswa
• Inokurumidza kupfuura kushandisa peni yekumaka
Tora iyo yakakodzera sarudzo yekumaka kana kunyora zvinyorwa zvako!
MimoWorkyakazvipira kuwana chaiwo mamiriro ekugadzira uye kugadzira nyanzvi laser mhinduro kuti ikubatsire.Kune Laser muchina masisitimu uye Laser sarudzo dzekusarudza zvinoenderana nezvakada kudiwa.Unogona kutarisa izvi kana zvakanangatibvunzeikune laser advice!
>>Laser Machine Overview
Maitiro ekusarudza chinyoreso uye ink jet kune yako laser cutter
Taura neLaser yedu Consultant Iye zvino!